Turkiga oo 'magaalo' u dhisay carruurta waalidkood ku waayay dagaalka Suuriya - BBC News Somali
Turkiga oo 'magaalo' u dhisay carruurta waalidkood ku waayay dagaalka Suuriya
Lahaanshaha sawirka ORPHANS CITY
Image caption 18kii ilmoodba hal dhisme ayay wada dagi doonaan
Dawladda Turkiga ayaa furtay goob aad u wayn oo loogu talagalay in ay dagaan waxna ku bartaan carruurta ay waalidkood ku dhinteen colaadda Suuriya.
Dhismeyaashan oo laga dhisay magaalada Reyhanli ee ku taalla xadka koonfurta bari ayaa hoy u noqon doonta 990 carruur ah, warbaahinta Turkiguna waxay ku tilmaameen guryo si wanaagsan loo diyaariyay.
Goobtan ayaa 55 dhisme ka kooban waxayna leedahay afar iskuul, masaajid, goobo lagu ciyaaro iyo garoomo.
Xaruntan waxaa lagu dhisay wax ka yar labo sano waxaana iska kaashaday dawladda Turkiga iyo labo hay'adood oo gargaar.
Hay'adda Qarammada Midoobay u qaabilsan carruurta ee Unicef ayaa ku qiyaastay in lix milyan oo carruur ah ay saameeyeen lix sano oo ay dagaallo ka socdeen dalka Suuriya.
In kabadan 2.3 milyan ayaa ka qaxay Suuriya loona diiwaan galiyay qaxootinimo.
Dalka Turkiga ayaa hadda hoy u ah 800,000 oo carruur Suuriyaan ah oo jooga da'dii waxbarashada kuwaas oo iskuulada laga diiwaangaliyay 60%.
Magaaladan carruurta agoonta iyo rajada ah waxaa gacan ka gaystay Hay'adda IHH ee dawladda Turkigu hoostagta iyo hay'adda gargaarka banii'aadanka ee RAF oo uu leeyahay Sheekh Thani bin Cabdullah-ha reer Qadar.
Barta Internetka ee magaaladan ayaa lagu soo qoray in ujeedadu tahay in lagu daryeelo carruurta qaba dhibaatooyinka dagaalka ka soo gaaray ee dhanka maskaxda ah, carruurta waalidkood ku waayay Suuriya, gaar ahaan kuwa ku nool wadooyinka.
Siddeed iyo tobankii ilmood ee kaste waxay isla wadaagi doonaan labo dhisme waxaana ku wehelin doonaa qof xannaaneeya, waxayna wax ku baran doonaan labo dugsi oo hoose iyo labo dugsi oo sare oo laga dhisay gudaha dhismahaas.
Carruur kale oo 5,000 ah oon daganayn gudaha magaaladan ayaa iyagana ka faa'iidi doona adeegyada dhismeyaashaas.